Warqad Furan Ku Madaxweynaha Soomaaliya
Sidaad ogtahay dad aan mabda’ iyo manhaj lahayni dad jira maaha, Soomaalidana mabda’ iyo manhajkoodo waa DIINTA ISLAAMKA sidaas daraadeed haddaad doonaysid inaad shacabka Soomaaliyed u horseedid siday uga bixi lahaayeen mugdiga, dulmiga, duliga iyo dayaca soo daashaday ku maamul shareecada Islaamka....
Waxaan ku bilaabayaa magaca Allaah
Anigoo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo aad Madaxweynaha u tahay waxaan ugu horayntii Allaah ka baryayaa inuu isu keen sakhiro oo isu keen dumo. Adigana Allaah hakaa dhigo mid hogaanka si wanaagsan u qabta, annagana Allaah ha naga dhigo shacab wanaagsan oo waajibkooda guta.
Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu kor ahaaye kugu hago dariiqii Nabi Muxammad si aad khayr dhammaanti u heshaan adiga iyo shacabka aad madaxda u tahayba.
Waxaan warqadan furan kuugu soo gudbinayaa salaan, xusuusin, naseexo iyo duco. Arrimahaasi waxay ka mid yihiin xuquuqda aad igu leedahay oo diinta Islaamku i farayso. Waase markaad Allaah iyo Rasuulkiisa addeecdid ee Allaah ee Allaah haku waafajiyo.
Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu xaqa kuugu sugu siduu kor ahaaye ugu sugay Abu Bakar Al-Sadiiq markuu geeriyooday Nabigu (CSS) kuguna guuleeyo inaad Soomaalida kala irdhowday si nabad ah isugu soo ururisid.
Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu ku siiyo xikmadii Luqmaan si aad meel walba iyo mar walba talada ugu haboon sida ugu haboon iyo goorta ugu haboon u haleeshid.
Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu ku siiyo cadaaladii laba Cumar (Cumar Bin Khataab iyo Cumar bin Cabdi Caziiz) si aad Soomaali cadaalad ugu maamushid.
Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu ku siiyo qorsha wanaagii Nabi Yuusuf CSWS si aad Soomaali ugu dajisid qorsho ay u ayaan.
Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu ku siiyo xishoodkii Cismaan Bin Cafaan si aad xumo oo dhan uga xishootid, xumaanaha waaweyn caddaal daradaa ka mid ah.
Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu ku siiyo xilmigii iyo Alla u noqosho badidii Nabi Ibraahim scws si aad shacabka soomaaliyeed ugu turtid adiguna dambi dhaaf u heshid.
Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu ku siiyo samirkii Nabi Ayuub SCWS si aad dhibaatada wayn oo ku hortaal uga dabaalatid.
Intaas kadib waxaan kuugu naseexaynayaa arrimaha soo socda:
1) Waxaan ku xusuusinayaa hadalkii Cumar Bin Khataab (ra) oo ahaa haddii neef xoolo ahi shaam ku turunturoodo waxaan ka baqayaa in Allaah igu xisaabo oo i yiraahdo maxaad jidka uga samayn wayday marka Soomaali Allaaha hogaankooda kuu dhiibay uga baq oo cadaalad, raxmad iyo kala xigsad la’aan ku maamul.
2) Sidaad ogtahay dad aan mabda’ iyo manhaj lahayni dad jira maaha, Soomaalidana mabda’ iyo manhajkoodo waa DIINTA ISLAAMKA sidaas daraadeed haddaad doonaysid inaad shacabka Soomaaliyed u horseedid siday uga bixi lahaayeen mugdiga, dulmiga, duliga iyo dayaca soo daashaday ku maamul shareecada Islaamka dariiq kalena haku lugoyn shacabka.
Haddaad dib u jaleecdid taariikhda dunida muslimiinta; sharaf, cilmi, horumar iyo cadaalad waxaa ugu danbaysay xukunkii Islaamka, maalintii laga leexiyay xukunkii Islaamka dhibaatadii u bilaabatay waa tan maanta meel muslim joogaba ku dul habsan.
Sidaad ogtahay DIINTA ISLAAMKU waa diin cilmi (scientific religion) qarniga 21-tanaadna waa qarni cilmi, tusaale waxaa kuugu filan dadka soo gala Diinta Islaamka noocooda, waa dadka cilmiga leh ama fakara oo RUNTA si cilmi ah u baara. Sidaas daraadeed waxaan kuugu naseexaynayaa inaadan ka af qaban dadka Soomaaliyeed cilmiga iyo nolosha wanaagsan oo diintoodu xambaarsantahay.
Haddii aad isku daydid inaad Soomaali ku xukuntid xukun khilaafsan diinta islaamka waa dhici kartaa inaad kursiga madaxweynenimada mudo ku fadhidid laakin u malaynmayo inaad ku guulaysanaysid inaad Soomaali nolol wanaagsan iyo liibaan u horseedid sababtoo ah wax walba oo kale horay baa loogu soo lugooyay. Marka waxaan ku leeyahay Mudane Madaxweyne “WAARIMAYSIDE WAR HAKAA HARO”.
3) Lataliyeyaal aqoon wanaagsan leh daacadna u ah dadka Soomaaliyeed isku wareeji iskana fogee dadka dantooda ka hor mariya danta shacabka.
4) Shacabka Soomaaliyeed karaamadiisii dhuntay waxay ila tahay inaad u horseedi kartid inay u soo noqoto haddaad samaysid labo arrimood oo kala ah: a) Ilo dhaqaale oo loo abuuro b) in laga daaweeyo sunta la cabsiiyay, siiba dhalinyarada indhaha ku kala qaaday dil, dhac, qabsasho iyo belaayo aan laga sheekayn karin. Daawada la hubo inay ku daawoobi karaan si deg deg ah waa iyadoo culimo diinta aqoon xeel dheer u leh Allana ka baqaysa ay si joogta ah ugu muxaadareeyaan oo u carro rogaan sida beerta loo carro rogo markii la rabo in miro cusub lagu beero.
Waxaan kaloo oran lahaa adduunka kaalmaha aad ka dalbanaysaan ku darsaday dhakhaatiir aqoon u leh cudurada ka dhasha xaaladaha dadka Soomaaliyeed soo maray, siiba dhallinyarada. Waxay ila tahay haddii laysugu dhafo muxaadarooyin diini ah, in dheer garad wanaagsan oo wax u sheega, tababaro jirka ah iyo dhakhaatiir nafsiyan u daaweeya inay dhicikarto inay noqdaan dad caadi ah ama ku dhaw.
Sidaad ogtahay dadka Soomaaliyeed badidoodu hadal kasta oo lagula hadlo waa haybsanayaan oo dhegaysan mayaan inta ay ka ogaadaan qofka hadlaya qabiilkiisa. Sidaas daraadeed waxay u baahanyihiin in lagula hadlo hadal ayan haybsan waana (Allaa yiri iyo Rasuulkaa yiri).
Soomaali in la xukumaa u malayn mayo inay adagtahay haddii dariiq sax ah loo maro sababaha soo socda dartood:
Waa dad wax walba oo dad wadaago wadaaga 1) waa isku diin, 2) waa isku madhab, 3) waa isku af, 4) waa isku caadooyin, 5) waa isku midab, 6) waa isku dal, intaasba waxaa u dheer 7) waa wada qaraabo oo meesha laga yiraahdo war Soomaali haygu haybsan meel uunbuu igasoo galayaaye 8) dad reer magaal ah (sophysticated) oo si qodo dheer u fakara maaha aha, 9) waa dad is jecel oo Soomaali necayb qoda dheer isuma qabaan sida dadka wada daga dalalka qaarkood. Shacabka Soomaaliyeed waxaa isu kaashaday laba cudur oo dilaa ah a) jahli iyo iyagoo waayey madax wanaagsan oo daacad ah. ALLAAH ADIGA HAGAA DHIGO BILOWGII MADAX WANAAGSAN.
Waxaan dhanbaalkayga ku gaba babaynayaa ducadan Allaah waxaan kaaga baryayaa inuu kugu daro addoomadiisa uu kor ahaaye u bixiyay XIBAADU RAXMAAN Allaah kor ahaaye haku waafajiyo toobada oo hakaa aqbalo markaas ka dibna dambiyadaad gashay xasanaad ha kuugu badalo, dabeecadahaaga inta xun xunna dabeecado wanaagsan ha kuugu badalo (suurada Furqaan 63-76).
Allaah xaqqa hayna waa fajiyo